Kooxda Manchester City oo xaqiijisay inay la saxiixatay daafac reer Brazil ah – Gool FM
(Manchester) 03 Mar 2020. Kooxda Man City ayaa xaqiijisay inay heshiis la gaareen xiddiga da’da yar ee lagu magacaabo Yan Couto oo ka soo dhaqaaqaya kooxda reer Brazil ee Coritiba.
17-sano jirkan ayaa qallinka ku duugi doona heshiis shan sano ah oo uu ku joogayo garoonka Etihad Stadium, isagoo soo jiitay indhaha kooxda Pep Guardiola kaddib qaab ciyaareed cajiib ah oo uu ka sameeyay Koobkii Adduunka ee 17-sano jirrada.
Daafacan ayaa 13 kulan u saftay xulka Brazil ee da’doodu ka yar tahay 17-ka sano, wuxuuna abuuray fursado ka badan daafacyada kale ee ka soo muuqday Koobka Adduunka bishii November, taasoo keentay inay qabtan indhaha maamulka sare ee kooxda Man City.
Shabakadda Manchester Evening News ayaa soo warisay bishii Janaayo in Citizens ay ka shaqeynayeen saxiixa da’yarka maalintii ugu danbeysay suuqa, balse ma aysan ku deg degin dhammeystirka heshiiska, iyadoo Couto ay u badan tahay inuusan saameyn deg deg ah ku yeelan kooxda koowaad.
Couto ayaa ka tagi doona Kooxda Coribita suuqa xagaaga, laakiin ilaa iyo haatan hal kulan ugama uusan soo muuqan kooxda reer Brazil Coribita, taasoo niyad jab weyn ku tahay xiddigan.
Si kastaba ha ahaatee, xiddigan ayaa wali kooxdiisa Coribita ka soo muuqan xilli ciyaareedkan 2020-ka xilli xulka Brazil ay da’dooda ka hooseyso 17-sano jirkada ka soo muuqday 13-kulan, isagoon gool dhalin.